အနော်တို့ရွာထဲမှာဗျာ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အနော်တို့ရွာထဲမှာဗျာ…..
Posted by Wow on Oct 28, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 33 comments
ရွာကိုတစ်ကျော့ပြန်လာတဲ့ ကိုကိုမမများလဲရှိတော့ …
ရွာ့သက်ကြီးဝါကြီးများကိုတော့ နွားရှေ့ထွန်ကျူးတယ် မထင်ပါနဲ့ ဖွတ်မိကျောင်းဖြစ် မြစ်မချမ်းသာဆိုသလို မိကျောင်းမင်းရေခင်းပြရမှာဖြင့်ရင် တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုပေမဲ့ သေချင်တဲ့ကျားတောပြောင်း ဆိုတာက ရှိသေးတော့ မပြောမပီး မတီးမမြည်ဆိုသလို (ဟဲ့… မိဗုံဒီနားလာ.. )
တိတ်တိတ်နေ ထောင်တန်ဆိုတာကလဲ ရှိသေးတော့ အဖိုးသေရင် မြေးပျော်ဆိုသလို… တာမီးကလဲ မုန့်ဟင်းခါးကြိုက်တော့… ဟယ်.. ရေးရင်းနဲ့ ကွကိုယ် ရေဝေးနားရောက်လာမှန်းတောင် မသိလိုက်ဝူး… ခွေးလွှတ်ကြပါ…
သူကတော့ ရှားပါးအကောင်လေးတွေမွေးမြူတာ ၀ါသနာပါတော့ ဒေါင်းမွေးထားပြီး ဥဥထဲက အိုက်နားက မခွာပါဝူး…. ဒေါင်းဥခန့်မျှ… အိမွမွဆိုပြီး မျက်လုံးကြီးတွေတ၀င်းဝင်းနဲ့… ရပ်ရေးရွာရေး အားတက်နေပုံများနှယ် မြင်ယုံနဲ့ အကြည်ညိုပျက်… အဲလေ.. ကြည်ညိုလောက်တယ်..
ဒဂျီး.. အိုက် ဒေါင်းဥနားပဲ အချိန်ကုန်မနေနဲ့… ဟိုမှာ ဂျာပွန်ပြန် မိဂီဆို ဒူးရင်းသီး အလုံးလိုက်မျိုတာ… ရွာဒီလောက် ခြောက်နေတာ အပြင်ထွက်အူးဗျ… အနော်.. တူညားတွေကို ထမင်းဟင်းလိုက်ချက်ခိုင်းပြီး အလှုလုပ်ခိုင်းအူးမယ်.. ရွာစည်အောင်…. :byee:
ဟတ်ကဲ့.. အာသီးပေါ်အောင် အော်ပြောပြီး ထွက်သွားတာကတော့ ရွာ့ရှုမညီး ကွမ်းဗန်းပန်းဗန်းမှောက် (ကွမ်းတောင်ပန်းတောင်ကိုင်ရင်း ဆိတ်သားကင် အာရုံစိုက်စားမိလို့ ဗန်းမှောက်သွား) ဆွိကေဇီ ဖစ်ပါတယ်….
ဒူးရင်းသီး… ဒူးရင်းသီး… ဟင်းးးးးးးး
ဒူးရင်းသီးနား ကျိတ်မနိုင်ခဲမရတွေနဲ့ ယုယလိုက် အလုံးလိုက်မြိုချမယ်ပြင်လိုက်နဲ့သူကတော့… ဂျာပွန်မှာ နတ်ကနားသွားကရာက ဇတ်ခေါင်းကွဲပြီး ပြန်လာတဲ့ မယ်ဂိ……
ကရင်ပုရ ခင်ညားပါတဲ့ချီးလောက်ဆို တူးရမဲ့တွင်းက ဘယ်နှစ်တောင်ချိတယ်…..
စကားတပြောပြောနယ် ရွာလယ် လမ်းလျှောက်လာသူများကတော့ အုတ်ရှစ်ခြံပိုင် ချီးရေးရာကျွမ်းကျင်သူ မိုက်ကယ် ဂျော်လကီပုနှင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဗိုလ်မထား တွင်းတူးမိုက်မဲ့ ဟောင်ကောင်ပြန်ကျောက်စ်……
ဟီးးးး … နောက်လူတွေနဲ့ ဆက်မိတ်ဆက်ပေးပါအူးမယ်…..
နာ ဂလောက် အာသီးပေါ်အောင် အော်တာကို တဂျီးက ဒေါင်းဥ နား က မခွါပါဘူးအေရယ်။
နာ ပဲ အဖိုဆို မီးဖိုနား မကပ် သံဒိတ်ထန်ကို ဖျက်ပြီး မီးဖိုချောင်ဝင်နေရတယ်။
ဂျာပွန်ပြန် နာတို့မောင်လေးလည်း ဒူးရင်းသီးဆိပ်မိနေပြီထင်တယ်။ အေးလေ တက်စာ ကိုးးးးးးး
တွင်း စပယ်ရှယ်လစ်နဲ့ အင်အင်း စပယ်ရှယ်လစ်နဲ့ကလည်း အတော်လိုက်သကိုးးးး
နိ ၅၀၀၀ တန် ကိုကိုကြီးကျမှ ဘယ်လိုရေးမတုန်း ကြည့်ဦးမယ်။
ကျုပ် ကျမှ ဒူးရင်းသီးဒဲ့ဗျာ.
သဂျီးရဲ့ ဒေါင်းဥဂါထာကို… မောင်ဆောရိုးက ရွတ်ဖတ်လို့ကောင်းတုန်း…
ပါးဖောင်းဖောင်းနဲ့ ဆွိကေဇီက အစားသောင်းကျန်းတုံး…
မရွှေဝေါင်းက ချောင်းနဘေးမှာ သိုက်သမိုင်းကားရိုက်မို့ ကြံတုန်း…
ကျောက်စ်လား… မပြောတော့ပါဘူး… ဟီ ဟိ
ကျောက်စ်လား …ရင်ခွင်ကျယ်ကြီးထဲ ..နှင်းမိုးတွေတစ်ကိုယ်စာရွာ…ခုခိခုခိ….
​ပြောတဲ့အတိုင်း မြန်​မြန်​​ ​ရေးဗျ
ဟီး… ၀ိုင်းဝန်းအားပေးဂျတော့ နာတော့ ပဲကြီးမနိုင်ပဲ ချဉ်ဟင်းစားမိဘီထင်ဒယ်
ဘယ်အချိန် ကျန်တာဆက်လာမလဲ မြန်မြန်ပြော….ဟီဟိ
ဖြစ်ပုံက… မင်းနန်ပျို့ထဲ.. အဲဒီမင်းသမီး..အသက် ၁၃နှစ်လောက်.. ဒေါင်းဥခန့်မျှပိစိပေါက်စကို.. မင်းသားမွမွသွားလုပ်နေတာပြောနေတာဟဲ့..
.. မသုံးရေးချမသုံး.. ခွာရေးချ..ခွာ…
ဖြစ်ပြန်ပြီ ….ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သူကြီးကို …တို့ဘယ်လိုမှနားမလည် …ခုခွိခုခွိ….တင်တော့ထင်သား…ဦးကျောက်စ်ကိုတောင်ပြောမို့ …သူကြီးက ကျွဲကောသီးဂိုဏ်းဝင်ပါဆို…အဟိဟိဟိ
ဒီလောက်သတင်းကြီးပီးမှတော့ မရတော့ဝူးဒဂျီး… ဒေါင်းဥ မကြိုက်ကြောင်း သဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါ
”…မယ်တော့်ဆောင်က၊ ညိုရောင်စမ်းလဲ၊့ ကူးကြွခဲ့မှ၊
မင်းငဲ့စက်ခွင်၊ သုတ်သုတ်ဝင်၍၊ ရွှေစင်ရတနာ၊ လျှောင်းလှည့်ရာမှာ
အသာတစောင်း၊ ရွှေလက်မောင်းကို၊ ပျောင်းပျောင်းနွဲ့နွဲ့၊
မှီခါတွဲ့လျက်၊ ရဲ့ရဲ့နီစင်၊ ခန်းလုံးရွှင်သည်၊ ပန်းရင်ဝတ်တွင်း၊
လက်တော်သွင်း၍၊ မြဆင်းရှက်ဖြာ၊ ကြောစိမ်းမြွာလျက်၊
လက်ယာရစ်စု၊ မွေးရှင်နုနှင့်၊ ဒေါင်းဥခန့်မျှ၊ အိမွမွကို၊ ခွက်ဝ
ပန်းရည်၊ ဆုပ်နယ်နည်သို့၊ လှည့်လည်ထပ်ထပ်၊ သုံးသပ်၍ပြီး၊
နီလာသီးကို၊ မငြီးဖန်ဖန်၊ ကစားပြန်သော၊ အလွန်ယားလှ၊
ကြက်သီးထ၍၊ ဟာဖျာ့ထိပ်တင်၊ လျှောက်ပါလျှင်လည်း….”
ကျုပ်ဂျီးဒေါ်.နာမည်အရင်းက ၀ါးလက်ခုပ် ပါဗျို့ :byee:
ဟဲ့ တိတ်တိတ်နေ.. အူးလေးနဲ့ မင်ဂါဆောင်မှာမှ သတို့သမီးက ၀ါးလက်ခုတ်နဲ့ က မို့ဟာ …. ခုတော့ လူသိကုန်ဘီ…
wow ရေ ဒေါင်းဥ ဆိုဒါ ဘာ အဓိပယ် လဲ ဟင်.
စကာထာ ဝှတ် မ နေ ပါ နဲ့ ရှင်း ပြ ပါ
စကားထှာမ၀ှက်ပါဘူး no non negative ရယ်… သိကြတယ်ထင်လို့ပါ…
ဒဂျီးရဲ့ ဒေါင်းဥကိစ္စက မင်းနန်ပျို့ ရွတ်ပြမှရမယ်ထင်တယ်… လုပ်ကြအူး… အနော်မေ့နေဘီ…
မင်းနန်ပျို့ထဲမှာ သူ့ချစ်သူ မင်းသမီးလေးကို ဒေါင်းဥနဲ့နှိုင်းတာရယ် … ဒေါင်းဥက ကြက်ဥသုံးလုံးစာလောက် ရှိဆိုပဲ… :hee:
ဒါင်းဥ ကို မကြိုက်စရာအကြောင်းမရှိ ဒါ လား?
ဥလေးတွေ..အဲလေ ဦးလေးတွေသိပ်ခြစ်တတ်ကြတာကတော့ တရွာလုံးမသိသူမရှိသလောက်ပါပဲ
ဒါနဲ့..မွwow ရဲ့ ရွာ့ဆယ်လီဗြစ်တီlist ကနည်းလိုက်တာ
ဒေါင်းဥ မသိဝူးဆိုတော့ ဒူးရင်းသီးနဲ့ ဂေါ်ဖီထုတ်တော့သိတယ်ပေါ့…
ရွာ့ဆယ်ဗျစ်တီတွေလာပါအူးမယ် ခုလောလောဆယ် သိပ်ကျိမရသူတွေ အဲလေ… သိပ်ချစ်ရသူတွေ အရင်ရေးတာ…
နာ… ဘာမှ မပေါဝူးနော်…
ကျွဲကောစိုင်းက ခုတစ်လော နာမယ်ကြီးနေတဲ့ မင်္ဂလာကန့်လန့်ကာနောက်က လူကြီးပေါ့အေ…
အဲဒီလူတွေတော်တော်ရှိုးတယ်.. မကြီးဝေါင်းက မိတ်ဆက်ပေးနေတာစိတ်မ၀င်စားဘဲ.. ဒေါင်းဥ ဒက်ဖနေရှင်းဖွင့်နေကြတယ်
အေးလေ…. ခွစ်ရယ်… မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့သူတွေတော့ စိတ်မ၀င်စား ဒေါင်းဥမှ စိတ်ဝင်စားရတယ်လို့
မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့သူတွေ ကို လဲ မှတ်သွား ပါ ဒယ်. ဝိတေတ တွေ ပါတွဲ မှတ်သွား ပါ ဒယ်
အဦးဆုံးကတော့ ရွာသူကြီး ဒါင်းဥ နဲ့ ဂျာပွန်ပြန် မိဂီ ဒူးရင်းသီး
ဒေါ်ဝေါင်းက မကောင်းသူထိပ် ကောင်းသူထိပ် ပစ်နေတယ်။
ဟီးးး အခုပေါ်လာဒါကတော့ အော်မေ့ဂိုဏ်းထိပ်သီး ဂိုဏ်းချုပ်ပါခင်ညားးးး